Uzitholele abadlali azobasebenzisa kwiDStv Diski Challenge oweRoyal AM eMsinga - Impempe
Uzitholele abadlali azobasebenzisa kwiDStv Diski Challenge oweRoyal AM eMsinga
June 1, 2021 Impempe.com
Utheleke kungazelele muntu uSazi Ngubane ongumqeqeshi weRoyal AM kwiMsinga Mayoral Cup ngempelasonto edlule. Lo mqeqeshi ubehambisana noTsepo Ntsoane owake wayibamba ngobuchule esizswini kuMaZulu FC, Orlando Pirates, Mthatha Bush Bucks nakwiGolden Arrows bezohlwaya ikhono elisha kule midlalo. Ekhuluma neMpempe, uNgubane uthe: “Inhloso yokuza lapha eMsinga ukuzohlwaya ikhono kubafana balapha.
“Lokhu kungoba ngikholwa ukuthi baningi abadlali kule ndawo abangabonwa ngamaqembu adlala ezigabeni ezikhokhelayo. Phela sekuzodingeka sibe neqembu lenkulisa labafana abaneminyaka engaphansi kuak-19 njengoba sizodlala esigabeni esiphezulu nje.
“Sizobadinga abafana abasebancane kwiDStv Diski Challenge,” kuchaza uNgubane. Yize isimo sezulu besingesihle amakhaza eshubisa umkantsha, amaqembu aphume ngobuningi futhi uNgubane uthe bakhona abafana abantshontshe iso lakhe.
Sisekuzo ezaseMsinga, kuzothi ngoJuni 5 kube neMsinga Half Marathon lapho kulindeleke abasubathi abaningi abahlonishwayo emhlabeni wonke. Omunye wabo nguBongumusa Mthembu owake wanqoba iComrades Marathon neTwo Oceans. Imeya yomkhandlu waseMsinga, uB.P. Ngcobo uthe kuningi abakwenzayo ukuthuthukisa ezemidlalo enhlobo nhlobo. Isizathu salokhu uthe ukubona ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kubantu abasha.
“Sibone kungcono sibasize ngokubavulela amathuba kwezemidlalo ngoba umuntu onekhono useyakwazi ukondla umndeni ngezemidlalo. “Sekuzoba usikompilo lakhona ukuthuthukisa ezemidlalo njengoba kwenza abantu balapha eSpain amaCatalan nabasungula usikompilo lwebhola endaweni eyayiyijondolo kodwa namuhla le ndawo ihlonshwa umhlaba wonke ngeBarcelona,” kusho uNgcobo.
Uphinde waveza ukuthi njengamanje bayaneliseka ngamaciko aseMsinga ngendlela athathe le ndawo ayibeka ezingeni lomhlaba. Kula maciko kubalwa oShwi noMntekhala, Mtshengiseni Gcwensa (ongasekho), Nogabisela, Ngxalothi, Kati eliMnyama, Mxosheni neNkosi yaMagcokama. Uthe bazophinde batshale imali kulo mkhakha wezobuciko.
Previous Previous post: LISENETHINI!: Kuyakhuthaza ukubona abafana abakhuliswe yiqembu sebequkula izindebe
Next Next post: ISAFA ayinanxa noBaxter okhonjwa kwiChiefs